Jereo ny spa tsara indrindra any Eropa sy Espana | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | Spa, General
Amin'izao fotoana izao, azo atao ny mahita spa any ankoatry ny toerana ivoahan'ny rano mafana amin'ny natiora. Izany no antony misy spa sy spa be any Espana ary koa amin'ny ambaratonga eropeana izay mendrika hitsidika. Hanome anao hevitra vitsivitsy momba ny spa tsara indrindra izahay hanomezana anao vanim-potoana milamina.
Anisan'ireo spaoro resahintsika ny tsara indrindra any Espana na Eropa, ary koa ny tanàna spaoro izay ny rano mafana no tena manintona azy. Tsy isalasalana fa maro ny toeran-kaleha rehefa mifidy fialan-tsasatra fialan-tsasatra.
1 Spa any Eropa
2 Spa any Espana
Spa any Eropa
Any Eropa dia misy tanàna spa maro izay ahafahanao mankafy ny loharano mafana sy ny fizahan-tany fizahan-tany tsara indrindra amin'ny fanasitranana fialan-tsasatra.
Budapest no tanàna spa malaza indrindra, satria manana loharano voajanahary sy artifisialy zato mahery izy io. Ny rano miakatra avy amin'ny loharano dia 20 ka hatramin'ny 80 degre ary misy trano tena malaza izay tsy tokony halainao. Széchenyi sy Gellert no anisan'ny malaza indrindra, satria izy no voalohany amin'ireo lehibe indrindra any Eropa.
Karlovy Vary Fitsidihana tsy maintsy atao raha mankany Prague any amin'ny Repoblika Tseky isika. Tanàna iray izay nekena nandritra ny taonjato maro ny fananan'ny rano mafana ao aminy. Iray amin'ireo toerana hankafizanao ny fitsaboana ny Grand Hotel Pupp. Ho fanampin'izay, ny tanàna dia manana fanampin'ny manana fomba tsara Belle Epoque.
La tanàna fandroana Fantatra tsara any Angletera ny loharano mafana, satria io ihany no tanàna spa misy azy ireo. Ireo rano ireo dia efa fantatra tamin'ny andro romana ary nahatonga ny tanàna ho lasa toerana nankafizan'ny kilasy ambony ny fialan-tsasatra sy ny fitsaboana azy ireo. Mila mitsidika ny Termae Bath Spa nohavaozina ianao mba hankafizanao ny fitsaboana tsara indrindra.
Bagno Vignoni dia any Italia, ao amin'ny lohasaha Orza. Ireo loharano mafana ireo dia efa nampiasaina tamin'ny andron'ny Romanina, ka izany no nankafizin'izy ireo ny lazan'izy ireo sy ny fahagola. Ny zavatra tena mahaliana dia eo afovoan'ny tanàna ianao dia afaka mahita dobo filomanosana any ivelany izay mihoatra ny roa arivo taona miaraka amin'ny rano izay mivoaka amin'ny 49 degre.
Raha isika andao hankany IslandyAzo antoka fa hitsidika ny renivohitra Reykjavik isika. Eny, tena akaikin'ny tanàna dia iray amin'ireo spaoro malalaka misokatra eto an-tany. Azo antoka fa efa nahita ny sarin'ity toerana nofinofy ity ianao, miorina amin'ny toerana lavitra. Manondro ny Blue Lagoon na Blue Lagoon ao Grindavik izahay, izay mahasarika mpitsidika an'arivony isan-taona, izay maniry hankafy ny loharano mafana sy ny lanezy feno lanezy amin'ny fotoana iray. Eto amin'ity firenena ity dia misy hetsika geothermal lehibe ary izany no antony iray amin'ireo toerana be mpitady indrindra amin'ny resaka rano mafana, noho ireo loharano voajanahary.
A la Tanànan'ny Istanbul dia tsy maintsy mandeha ianao mba hanandramana ireo hamama na fandroana tiorka taloha. Ity fomban-drazana izay hita ankehitriny amin'ny spa ity dia nisy teo amin'ny fiainan'ny Silamo nandritra ny taonjato maro. Ny trano fandroana toy ny Sleymaniye dia hita ao an-tanàna, ary tsy toerana hikarakarana ny vatana fotsiny izy ireo, fa koa mba hifaneraserana.
Evian les bains Tanàna kely iray izy izay fantatry ny tavoahangy rano avo lenta izay lanina erak'izao tontolo izao. Saingy ity tanàna eo amin'ny sisintany miaraka amin'i France sy Suisse ity dia manome betsaka kokoa ho an'ireo mpizahatany. Izy io dia manana toeram-pitsaboana lehibe antsoina hoe Evian Baths.
Spa any Espana
Any Espana dia tsy dia be loatra ny toerana misy loharano mafana voajanahary, fa azo atao kosa ny mahita spa maro any amin'ny hotely ahazoana aina, noho ny firoboroboana ity karazana fizahan-tany ity. Misy ny sasany izay fantatra indrindra, na amin'ny toerany na amin'ny fitsaboana azy ireo.
El Burgo de Osma Thermal Hotel Any Burgos no misy azy ary mety safidy tsara amin'ny fialan-tsasatra. Toerana manan-tantara ity, satria ny dobo spaoro dia miorina eo an-tokotanin'ny tsangambaton'ny Renaissance, ao amin'ny faritr'i Mozambika mahafinaritra nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Manolotra karazan-tsolika mafana marobe.
En Oviedo dia hita any Las Caldas Thermal Villa, spaoro iray manodidina ny lohataona iray. Manolotra fotodrafitrasa maoderina amin'ny tontolo voajanahary tena tsara. Manana dobo ivelany sy fitsaboana maro izy, manomboka amin'ny algoma Dead Sea ka hatrany amin'ny sôkôla.
El Alva Park Hotel & Spa Toerana tsara any Lloret de Mar. Hotely misy spa ity ahafahanao manandrana ny 'fandroan'ny andriambavy hindoa'. Efitra haingoina amin'ny fomba tena izy izay misy pisinina miaraka amin'ny mozika anaty rano.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ny spa tsara indrindra amin'ny fialan-tsasatra
5 Ranomasina Fuerteventura ho an'ny fialantsasatrao manaraka